च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिएलगत्तै रोनाल्डोको क्बल युभेन्टसको शेयरमा २२ प्रतिशतको गिरावट - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिएलगत्तै रोनाल्डोको क्बल युभेन्टसको शेयरमा २२ प्रतिशतको गिरावट
Posted by Chintan | ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १२:३० |
एजेन्सी । बुधबार विहान मिलान स्टक बजारमा रहेको इटालियन फुटबल क्लब युभेन्टसको शेयरमा २२% ले गिरावट आयो । यो गिरावट युभेन्टस च्याम्पियन लिगको क्वाटर–फाइनलमा पराजित भएपछि आएको थियो ।
युभेन्टस डच क्लब एजाक्स याम्सटरडमसँग हारेको थियो । टुरिनमा भएको खेलमा डच क्लबले युभेन्टसमाथि २–१ को अग्रता हासिल गरेको थियो । क्वाटर–फाइनलको दोस्रो प्रतिस्पर्धापछि एलाक्स ३–२ अकंतालिका सहित सेमिफाइनल पुगेको छ ।
क्बलको शेयरमा दिनको मध्यान्हमा केही सुधार आएको भए पनि शेयर बजार बन्द हुँदा युभेन्टसको शेयरमा १७.६% गिरावट आएको थियो ।
युभेन्टसले इटालीको राष्ट्रिय लिगमा सबैभन्दा बढी पटक उपाधि हाँसिल गरेर इतिहास बनाएको छ । त्यस्तै उक्त क्लब पछिल्लो समय सन् २०१५ र सन् २०१७ मा च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुगेको थियो ।
सुपरस्टार रोनाल्डोको नेतृत्वमा स्टार खेलाडीहरुको बाहूल्य रहेको क्लबलाई धेरैले खेल समीक्षकहरुले च्याम्पियन लिगको हकदार मानेका थिए । तर उ सिजनको सुरुमा कमजोर मानिएको एजाक्ससँग हार्यो ।
युभेन्टसले प्रतियोगिता जित्ने विश्वासकै कारण खेल सुरु हुनु अघि क्लबको शेयर यस वर्षकै उच्च १.७१ युरो पुगेको थियो ।
तर बुधबार उसको शेयरमा झण्डै एक चौथाईको ह्रास आयो । तीव्र गतिमा शेयरमूल्य घटेपछि एक पटक त कम्पनीको शेयरलाई सूचकांकबाटै हटाइएको थियो ।
अजाक्सको भने शेयर वृद्धि
युभेन्टसको शेयर मुल्यमा उच्च न्युनिकरण हुदाँ उसलाई हराउने एजाक्सको शेयर भने ९% ले बढेर उसको इतिहासकै सबैभन्दा उच्च १८.७० युरोमा बन्द भएको थियो । यो वृद्धिसँगै क्लबको मुल्याकंन ३४ करोड युरो भएको छ ।
च्याम्पियन्स लिग सुरुमा त्यति ठूलो दावेदार नमानिएको एजाक्स भने सन् १९९० को दशकपछि पहिलो पटक युरोपको यति ठूलो प्रतिस्पर्धाको अन्तिम चारमा पुगेको छ ।
च्याम्पियन्स लिग युरोपको सबैभन्दा ठूलो क्लब प्रतिस्पर्धा हो । युरोपेली फुटबलको प्रशासन हेर्ने निकाय यूएफाले प्रतिस्पर्धाको एक सिजनमा सहभागी सबै क्लबबीच झण्डै २ अर्ब युरो वितरण गर्ने गर्छ । क्वाटर–फाइनलमा मात्रै पुग्दा पनि क्लबले १.२ करोड युरो पाउछन् ।
उक्त प्रतियोगितमा सहभागीमात्रै हुदाँ पनि क्लबहरुको उलेख्य प्रचार हुने गर्छ । जस्तो ब्रिटिस क्लब म्यानचेस्टर सिटिले आफ्ना टी–सर्टको लागि पुमासँग ६० करोड पाउण्डको सम्झौता गरेको छ । अब उसको टीसर्टको विक्रिसमेत क्लबले च्याम्पियन लिगमा गर्ने प्रदर्शनको आधारमा निर्धारण हुनेछ ।
हालको शेयरमा आएको ¥हासपछि युभेन्टसको शेयर मार्च अघिकै अवस्थामा पुगेको छ । त्यो बेला रोनाल्डोले ह्याट्रिकले को सहायताले क्लब क्वाटर फाइनल पुगेको थियो ।
रोनाल्डोलाई यही सिजनको सुरुमा १० करोड युरोमा युभेन्टसले भित्राएको थियो । पाँच पटक आफू संलग्न क्लबलाई च्याम्पियन लिग जिताएका रोनाल्डो क्वाटर फाइनलको दोस्रो प्रतिस्पर्धामा एक गोल गरेको भए पनि उक्त गोल जितको लागि पर्याप्त भएन ।
Previousनेकपा अध्यक्ष दाहाल सुटुक्क सुकुटेमा
Nextके माछा सेवनले मुटु र मस्तिष्कलाई फाइदा गर्छ ?
२ मंसिर २०७५, आईतवार १३:३३
युएई जाने विदेशी नागरिकलाई यी वस्तुहरु लैजान प्रतिवन्ध !
२७ कार्तिक २०७३, शनिबार १२:४७
जव बार्सिलोनाले लज्जास्पद अवस्थाको सामना गर्नपर्यो…..
८ भाद्र २०७४, बिहीबार ०७:५९